ပုရိသ တွေနှစ်ခါပြန် ကြည့်ချင်လောက်အောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေ တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် – Shwe Ba
ပုရိသ တွေနှစ်ခါပြန် ကြည့်ချင်လောက်အောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းနေ တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်
ချစ် ပရိသတ် ကြီး ရေ … ပုရိသ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အသည်း စွဲ မော်ဒယ် တစ်ဦး ဖြစ် တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကို မိတ်ဆက်ပေး စရာမလို လောက်အောင် သိကြ မ ယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ သူမ ရဲ့ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ အပြုံးချိုချို လေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တွေက ပုရိသ တွေကို ဆွဲဆောင် နေတဲ့ ထူးခြားမှု တွေ ဆိုရင် လည်း မှားမယ် မထင် ပါဘူး။ သူမ ရဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အမိုက် စား ပုံေ လးတွေ ဟာ ဆို ရင်လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက် နှာပေါ် တွင် ရေပန်း စား လူကြိုက် များ တာ လည်း တွေ့ ရ ပါ တယ် ။
ယခု လက် ရှိ မှာတော့ သူမ က အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေ တာ ဖြစ် ပြီး photo shooting အမိုက်စား လေးတွေကို လက် ခံ ရိုက်ကူးနေ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အောင်ြ မင် ပြီး ပရိသတ် ချစ် တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် အောင် အကောင်း ဆုံး ကြိုးစားနေ တာ ကို လည်း မြင်တွေ့ရ ပါ တယ် ။ ဘယ်လို ဖက်ရှင် လေးတွေ ပဲ ဝတ် ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြား လှပ လာတဲ့ မိုးမြင့်သဇင် က တော့ အခု လက် ရှိမှာ လည်း အမိုက်စား ပုံလေးတွေ နဲ့ ခြွေချ လိုက်ပြန် ပါပြီ နော် ။
ခေါင်မိုး ထပ် မှာ ဘောင်းဘီ အတို လေး နဲ့ မိမိုက်နေ အောင် ပိုစ့်ပေး ဓါတ် ဖမ်း နေတာဖြစ်လို့ ပုရိသ တွေ ရင် ကို လှုပ် ခတ် သွား မိ အသေ အချာ ပဲ မို့ ချစ် ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင် ရန် အတွက် ပြန် လည်ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် နော် ။ ကဲ …. ပရိသတ်တွေ ကလည်း မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံလေး တွေ ကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေ ပေး ခဲ့ဖို့ မ မေ့ လိုက် ပါနဲ့နော်.. ။ ဒါ့အပြင် သူမ ရဲ့ ဆက် လက် လျှောက် လှမ်း မယ့် အနု ပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို လည်း ပရိသတ်တွေ က အားပေး ကြမယ် မ လား … ။
ခဈြ ပရိသတျ ကွီး ရေ … ပုရိသ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အသညျး စှဲ မျောဒယျ တဈဦး ဖွဈ တဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျ ကို မိတျဆကျပေး စရာမလို လောကျအောငျ သိကွ မ ယျ ထငျပါ တယျနျော။ သူမ ရဲ့ ခဈြစရာကောငျး တဲ့ အပွုံးခြိုခြို လေးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး အလှ တှကေ ပုရိသ တှကေို ဆှဲဆောငျ နတေဲ့ ထူးခွားမှု တှေ ဆိုရငျ လညျး မှားမယျ မထငျ ပါဘူး။ သူမ ရဲ့ ဆကျစီ ကကြ အမိုကျ စား ပုံေ လးတှေ ဟာ ဆို ရငျလညျး ဖဘှေ့တျ စာမကျြ နှာပျေါ တှငျ ရပေနျး စား လူကွိုကျ မြား တာ လညျး တှေ့ ရ ပါ တယျ ။
ယခု လကျ ရှိ မှာတော့ သူမ က အနုပညာ အလုပျတှေ ကို ဆကျလကျ လုပျကိုငျ နေ တာ ဖွဈ ပွီး photo shooting အမိုကျစား လေးတှကေို လကျ ခံ ရိုကျကူးနေ တာ ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ။ ဒါ့အပွငျ အောငျွ မငျ ပွီး ပရိသတျ ခဈြ တဲ့ မျောဒယျ တဈဦးဖွဈ အောငျ အကောငျး ဆုံး ကွိုးစားနေ တာ ကို လညျး မွငျတှရေ့ ပါ တယျ ။ ဘယျလို ဖကျရှငျ လေးတှေ ပဲ ဝတျ ဝတျ တဈနေ့ တဈခွား ပိုပွီး ထူးခွား လှပ လာတဲ့ မိုးမွငျ့သဇငျ က တော့ အခု လကျ ရှိမှာ လညျး အမိုကျစား ပုံလေးတှေ နဲ့ ခွှခြေ လိုကျပွနျ ပါပွီ နျော ။
ခေါငျမိုး ထပျ မှာ ဘောငျးဘီ အတို လေး နဲ့ မိမိုကျနေ အောငျ ပိုဈ့ပေး ဓါတျ ဖမျး နတောဖွဈလို့ ပုရိသ တှေ ရငျ ကို လှုပျ ခတျ သှား မိ အသေ အခြာ ပဲ မို့ ခဈြ ပရိသတျ တှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျ ရနျ အတှကျ ပွနျ လညျဖျောပွ ပေးလိုကျ ပါတယျ နျော ။ ကဲ …. ပရိသတျတှေ ကလညျး မျောဒယျလျ မိုးမွငျ့သဇငျ ရဲ့ ပုံလေး တှေ ကို ကွညျ့ပွီး အသညျးလေးတှေ ပေး ခဲ့ဖို့ မ မေ့ လိုကျ ပါနဲ့နျော.. ။ ဒါ့အပွငျ သူမ ရဲ့ ဆကျ လကျ လြှောကျ လှမျး မယျ့ အနု ပညာ လှုပျရှားမှုတှေ ကို လညျး ပရိသတျတှေ က အားပေး ကွမယျ မ လား … ။